NORDBYHUS - Amasango Engadi 106
Gdańsk, pomorskie, i-Poland
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Nordbyhus
I-NORDBYHUS Garden Gates 106 iyifulethi eliyi-spesh nesitayela eliseGdansk Old Town elinendawo engu-43 m2. Ifulethi linikeza indawo yabantu abangu-4 futhi lihlanganisa igumbi lokuhlala, igumbi lokulala, ikhishi kanye negumbi lokugezela. Kukhona i-balcony enombono wengxenye endala yesikhungo sedolobha okuyimpahla emangalisayo.
Ifulethi litholakala esitezi sesi-2 esakhiweni esinezitezi eziyisithupha. Indawo ese-Długie Ogrody 18 ingezinye ezihlonishwa kakhulu eGdansk. Ifulethi eliseGdansk Old Town libizwa ngokuthi "Amasango Engadi" futhi kukhona nje uhambo lwemizuzu emi-5 ukusuka eNeptun Fountain kanye nokuhamba imizuzu emi-2 ukusuka eGdansk Marina!
Izinsiza eziningana ezinhle zilindele labo abasivakashela "eGarden Gates". Ithala eliphezulu lendlu elisesitezi sesi-6 liyindawo emangalisa ngempela yokuhlangana nabangane bakho, niphuze ikhofi futhi nibuke olwandle lwaseGdansk! I-Terrace ivuliwe nsuku zonke kusukela ngo-08.00 - 22.00. Ngaphezu kwalokho kunemishini yokuzivocavoca ezindaweni ezijwayelekile kanye nokuqina ngaphakathi kwesakhiwo.
I-WiFi yamahhala iyatholakala kuwo wonke amagumbi. Izivakashi ezihamba ngemoto zingapaka imoto endaweni yokupaka yangasese ehholo legaraji - mahhala!
Kunezinhlobonhlobo zezitolo zokudla, izitolo nezindawo zokudlela eziseduze nefulethi.
Sizokunakekela phakathi nakho konke ukuhlala kwakho e-Gdańsk. Sikhuluma isiNgisi, isiPolish nesiNorway.
UNordbyhus Ungumbungazi ovelele
Izilimi: English, Norsk, Polski, Svenska
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-$246.
Hlola ezinye izinketho ezise- Gdańsk namaphethelo